25 Responses to “နေကြာပန်းကလေးများလို....”
ထူးထူးဆန်းဆန်း နေကြာပင်လေးပါလား ချောရယ်...။ လူတိုင်းဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိရှိ၊ ရည်မှန်းချက်ပြည့်ပြည့်၀၀နဲ့ ဘ၀တိုက်ပွဲကို ယှဉ်ပြိုင်သင့်တာပေါ့ ချောရယ်။
ဟုတ်ပါ့ ချောရေ ... ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိဖို့က တကယ် အရေးကြီးတယ်။ မမေဆို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မယုံကြည်ဘူး (သူများလဲ မယုံပေါင်) ဟီးးးးး
ကိုယ်က အဲဒီလို ကျောက်တုံးကြီးမပြောနဲ့ ကျောက်စရစ်ခဲလေး ရှေ့မှာကာနေရင်တောင် လက်လျှော့မယ့် အစားထဲကလေ :D
ပုံထဲက နေကြာပန်းလေးတွေမြင်ပြီး မစားရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ နေကြာစေ့ စားချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွား ပေါက်လာတယ်။ (မနူးညံ့လိုက်ပုံများနော်) :))
Nice translation and it really encourages me. Thank you, sis!!
တကယ်ကို ခွန်အားတွေရသွားပါတယ်။ ဘဝမှာ စိတ်ပျက်စရာတွေ တွေ့တိုင်း အတိုက်အခိုက်ခံရတိုင်း စိတ်ပျက်နေခဲ့တာ နေကြာပန်းကလေးလိုပဲ ကွေ့ဝိုက်ကျော်တက်ပစ်လိုက်ဦးမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးလေးရသွားတယ် မချောရေ။
မချောပို့ စ်လေးက စိတ်ဓာတ်ခွန်အား ရစေတယ်...
စာလေးဖတ်ရတာ အင်နာဘွန်စီ ၁၀ လုံးလောက် တပြိုင်ထဲ သောက်လိုက် ရသလိုဘဲ
ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းတဲ့ ပို့စ်လေးပါပဲ မချောရေ... အခက်အခဲမရှိရင် ဘ၀လို့မမည်ပါတဲ့လေ..
အရမ်းကောင်းတဲ့ ပိုစ်လေး တစ်ခုပါဘဲ ခင်ဗျာ... :P
ဒီလိုမျိုး စိတ်ဓါတ်ခွန်အား ပေးတဲ့စာတွေကို မချောရဲ့ ပြေုပစ်ရှင်းလင်းတဲ့ ဘာသာပြန် အရေးအသားနဲ့ ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ ရင်ထဲကို တန်းရောက်သွားတယ်၊ ကျနော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိတဲ့ သာမန်ဖြစ်စဉ်လေး တွေကနေ ယူတတ်ရင် သင်ခန်းစာ ရစရာတွေ အများကြီးပဲလို့ တွေးနေမိတယ်...။
ဘဝမှာ အခက်အခဲတွေကတော့ ကြုံနေမှာပါပဲ။
ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကျော်လွှားမလဲဆိုတာကို နားလည်တတ်မြောက်ခြင်းကသာ စွမ်းရည်အစစ်အမှန်ပါ။
ခွန်အားတွေရသွားတယ်ဗျာ..။ ကျေးဇူး မချောရေ..။
နေကြာပန်းလေးရဲ့ ခွန်အားတွေရသွားပြီ မချော..ရေ..
ဒီလိုပဲ ကုန်းရုန်းထကြတာပေါ့ အစ်မရာ...... ကျနော် တို့ အားလုံး တစ်သက်လုံး ကုန်းရုန်း ထ လာခဲ့ကြရတာပဲ မဟုတ်လားလေ။
ကျေးဇူးပါ အားဆေးပိုစ့်လေးအတွက်း)
စိတ်ဓာတ်ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့ ပို့စ်လေးပါလား ချောရေ။ ဖတ်သူတို့အတွက် စိတ်ဓာတ်အင်အား တိုးသွားမှာသေချာတယ်။
ဆရာနေကြာ ပေါ့ :)
မချောရေ .. ဘယ်မှ မလည်နိုင်ဖြစ်နေလို့
ဒီပိုစ့်လေးအတွက် ကျေးဇူး charging ဖြည့်တဲ့ ပိုစ့်လေး
ဘယ်လို အခက်အခဲ မျိုးနဲ့ ဘဲ ကြုံကြုံ နေကြားပင်လေး ကျောက်တုံး၊ ကျောက်ခဲတွေ ကြားထဲက ကွေ့ ဝိုက်ထွက်ပြီး ရှင်သန်လာနိုင်တာကို တွေးပြီး အားသစ်ပြန်မွေးပါမယ် အစ်မချော...
နေကြာပင်လို ဖြစ်ဖို့ အတော်လေး ကြိုးစားရဦးမယ်။
ကျောက်တုံးတွေတွေ့ရင် နဲနဲ တုန်လှုပ်တတ်တဲ့ စိတ်ကိုလဲ ပြန်ပြုပြင်ရဦးမယ်။
ဒီ post လေးက တကယ်ကိုပဲ အားဆေးတစ်ခွက်ပါ.. မမချော
နေရောင်အောက်မှာ ခိုင်မာတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ နေကြာကိုဥပမာပေးပြီး အားတက်စေတာ ကျေးဇူးပါ။ အားထုတ်ထားမှုကို လေးစားလျက်ပါ.......